Hairless လိင်အင်္ဂါများသို့လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာအရသာများထည့်သွင်းခြင်း ... Oops! (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
လိင်မှုကိစ္စအရသာမပြည့်စုံသောလိင်အင်္ဂါများသို့ဆက်သွယ်ခြင်း… Oops! (၂၀၁၂)
ပစ္စုပ္ပန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုပါဝါလျှော့တွက်နှစ်ဦးစလုံး နှင့် သူတို့ရဲ့အရေးပါမှုကိုလွဲမှားစွာအနက်ဖွ ဆိုလိုသည်မှာလိင်မှုဆိုင်ရာအရသာသည်ထင်မြင်ချက်တစုံတရာကိုမဆို hardwired ဟုယူမှတ်သောကြောင့်လိင်စိတ်ကိုအန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုယူဆကြသည်။ ဤမှားယွင်းနေသည့်ရူပဗေဒအရမြို့ပတ်ရထားယူဆချက် (၂) ခုပေါ်ပေါက်လာသည်။ ပထမအချက်မှာ၊ လူတစ် ဦး သည်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာအားဖော်ပြရန်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါ၊ ဒုတိယအချက်မှာ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်မညီညွတ်သောအရာတစ်ခုခုသို့အထွတ်အထိပ်သို့စတင်လျှင်သူ၏“ စစ်မှန်သော” သဘာဝကိုရှာဖွေခြင်းမျှသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။ ထိုသို့သောချို့ယွင်းချက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကြောင့်လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေး သောရန်မြင့်တက်ပေးခဲ့တယ် ကြီးများငြင်းဆန် ဦး နှောက်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဆုလာဘ်အစီအစဉ်အပေါ်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပလပ်စတစ်သက်ရောက်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။
အမှန်တကယ်အတွေ့အကြုံ, သို့သော်ပြင်းထန်သောဆွတချို့ဦးနှောက်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုအကြံပြုထားသည်။ ၏အမှန်စင်စစ်အချို့ ဒီနေ့အင်တာနက် porn အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်နှင့် arousal ပုံစံများ-တစ်ဦးသည်ယခုအခါကောင်းစွာအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက် unnerving အပြောင်းအလဲများကိုလျှက်ရှိပါသည် အများအပြားစမ်းသပ်ချက် အဆိုပါထုတ်ဖော် ဦးနှောက်၏ plasticity။ ဤပြောင်းလဲမှုများ porn အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်နေချိန်မှာ reverse ရန်ခက်ခဲကြသည်။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင် insubstantial နှင့်ပင့်ကူအိမ်အဖြစ်အနတ္တအဖြစ်ထွက်စတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုကြိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသည်, သည်, သူတို့ကအော်ဂဇင်၏ပြင်းထန်သောဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်မြင့်မားသောကြောင့်ဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်းဦးနှောက်ကိုလမ်းကြောင်းချချနိုင်။
ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းပါးများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပြောင်းအလဲများသည် အကယ်၍ ဖြစ်ခဲ့လျှင်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပြခဲ့သည် အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်မှား အခြေခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၌တည်၏။ သို့သော်သူတို့သည်လည်းလျော့နည်းသိသိသာသာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီလူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။
Justin: ရင်သားကြီးခြင်းအတွက်ကျွန်တော်မှာကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ မနေ့ကဆီလီကွန် implants နှင့်၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ရှိသောမိန်းကလေးများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းတစ်ပုဒ်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကဒီမိန်းကလေးတွေတော်တော်များများကိုကမ်းခြေမှာပြခဲ့တယ်၊ တစ်ချိန်ကငါ့ကိုစိတ်ညှိုးငယ်စေပြီးညစ်ညမ်းတဲ့စိတ်ဆိုးနဲ့ငါ့ကိုလမ်းခွဲခဲ့ကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်လအကြာမှာ porn မပါဘဲသူတို့ဟာထူးဆန်းနေတယ်။ သဘာဝမဟုတ်ဘဲတိုးပွားလာသောရင်သားများကကျွန်ုပ်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ ငါသူတို့ဘာကြောင့်သူတို့ကိုဒီလိုလုပ်တာလဲ ရင်သားကြီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေများ deal ည့်ခံတာလဲ။ ပြီးတော့ဒါကသူ့ဘ ၀ တွေအများကြီးကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပဲ။
တစ်ဦးမလိုချင်တဲ့ arousal cue ၏ဦးနှောက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့စေရန်, တဦးတည်းဆင်တူတွေကိုမှ masturbating မဟုတ်အားဖြင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဆားကစ်-in ကိုသက်ဝင်ဤကိစ္စတွင်ငြိမ်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာလုံးဝသူတို့ကိုငြိမ်းအေးမရနိုင်ပေမယ့် Disuse တဖြည်းဖြည်း, သက်ဆိုင်ရာဆားကစ်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Flashbacks ဆန်းမဟုတ်ပါ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတွင်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်လိင်အင်္ဂါများကိုများသောအားဖြင့်ညစ်ညမ်းစေတတ်သည်၊ အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သောပုံဖော်ထားသောလိင်အင်္ဂါများကညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူအားဆုပေးသောစင်တာမှဆုကိုရယူရန်တိုက်တွန်းသည်။ porn အများစုတွင်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပါဝင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကြည့်သူသည်အော်ဂဇင်အတွက်အချက်တစ်ခုအနေဖြင့်တင်ပါးကိုသာအေးစက်စေသည်။ မည်သည့်အဝတ်အချည်းစည်းမရှိသောအောက်ခြေရှိယောက်ျားသည်မိန်းမ၊ ကလေးမဟုတ်သည်စသည်တို့အားအော်ဂဇင်ပြုရန်တိုက်တွန်းသည်။
ငါကဘယ်လိုရှာခဲ့တာလဲ ငါယခုအချိန်တွင်ငါ၏အအိမ်တွင်နေထိုင်နေ2နှစ်ပေါင်းအနည်းငယ်မိန်းကလေးရှိသည်, သူမပတ်ပတ်လည်အဝတ်အချည်းစည်းလမ်းလျှောက်ချစ်တော်မူ၏။ ငါသူမကိုအလိုအလျောက်ရာထူးအချို့ကိုငါ့ကိုယ်ပိုင် Self-ရက်စက်မှု porn အေးစက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြော, ရှက်ကြောက်ခြင်းဖြစ်၏။ စင်စစ်ငါခလုတ်နှင့် (ဆိုတောင်းပန်ပါတယ်) arousal နှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းဆုံးဖြတ်။ ငါအစဉ်အဆက်ကအပေါ်ပြုမူဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်ငါနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကိုမကြည့်ခဲ့ပေမဲ့သတိမဲ့တဲ့အစပျိုးနေတုန်းပဲ၊ ငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာအမြစ်တွယ်နေတယ်၊ ငါမိန်းမဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိရကြ! ညစ်ညမ်းမှုကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့ညစ်ညမ်းမှုကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့ပုံမပေါ်ခင်ဘယ်တော့မှသတိမပြုမိပါ။ ကျွန်တော့်နိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေမရိတ်ရတဲ့အချိန်တွေကိုမှတ်မိနေတုန်းပဲ။ သူတို့ခြေထောက်တွေတောင်မှဘယ်သူမှမုန်းမှာမဟုတ်ဘူး။ အခုလား။ သင်မရိတ်မနေလျှင်သင်ဟာတကယ့်အပြင်လူတစ်ယောက်လိုခံစားရသည်။
Hairlessness: တစ်ဦးမလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue
ငါ-Norman Doidge အားဖြင့်ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါဦးနှောက်ကိုဖတ်ပြီးသောအခါငါပထမဦးဆုံးတစ်နှစ်သို့မဟုတ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ညစ်ညမ်း၏စိတ်ပညာစိတ်ဝင်စားတယ်။ တွင် တဦးတည်းကျအခနျး သူကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းနှင့်အတူပြဿနာများရှိခြင်းသူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ client ကိုဆွေးနွေးထားပါတယ်။ အဆိုပါစာအုပ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒီအခနျးကယ့်ကိုငါ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်အတူစစ်ချီကြ၏ဘယ်လိုစဉ်းစားတယ်။ အကြှနျုပျ၏ပုံပြင်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဖြစ်ကောင်းအထီးကျန်မဟုတ်။
ငါအသက် ၂၈ နှစ်မပြည့်ခင်အထိလုံးဝညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုလုံးဝမသုံးခဲ့ဘူး။ ငါကတစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ်အဖြစ်ကခေတ္တထိတွေ့ခဲ့ပေမယ့်ရုံသို့ဘယ်တော့မှမ။ အရာဝတ္ထုပေါင်းစပ်မှုကအားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်။ အဓိကကတော့ကွန်ပျူတာကတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ပါ။ ငါမကြာခဏဆိုသလိုငါစတင်သုံးခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မမှာကျွန်မတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးကလေးမွေးဖွားလာတာကြောင့်အရာရာအမှိုက်ပုံတွေပြောင်းသွားတယ်။ တချို့မျှော်လင့်ထားတာ၊ တချို့တော့မဟုတ်ဘူး။
ငါလိုလားတဲ့အမျိုးသမီးအထီးအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စဉ်းစားလို။ သူမတစ်ဦးလေးနက်အမျိုးသမီးကြောင့်ငါသည်ငါ၏မယားကိုလက်ထပ်နှင့်အဘို့ငါသူမ၏လေးစားချစ်ကြတယ်။ ငါသည်ငါ၏နှစ်ခုငယ်ရွယ်ယောက်ျားလေးများပြုစုပျိုးထောင်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရကိုချစ်နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးသည်အလွန်မတ်ေတာရှိတဲ့တရားမျှတတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်ဖို့ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောမိဘတာဝန်များကနေပင်ပန်းကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အတူငါအချို့အန္တရာယ်ကင်းခံစားရှိသည်ဖို့တစ်လမ်းအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်, သူသည်လိုအပ်ရှိသမျှတို့သည်အိပ်စက်ခြင်းကိုရရန်, ငါ့ဇနီးစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့တောင်မှဒီဆှေးနှေးခဲ့, သူကအားလုံးကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
Little ကကျွန်မအတွက်သိခဲ့ပါ။ ဒါဟာငါ့အတိုးမြှင့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ပျက်သောငါ၏စိတ်တွင်အပြောင်းအလဲများတွေ့ကြုံခံစားဖို့အတော်လေးစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ porn ကို အသုံးပြု. ပြီးနောက်ငါသည်ငါ၏စိတ်တွင်မလိုချင်တဲ့ images နဲ့အတှေးအချေါတှေ့ရလာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အဘို့, အရှိဆုံးမမျှော်လင့်ဘဲအတွေ့အကြုံများအားဖြင့်ဖြစ်စေခဲ့သည်။
တကယ့်ကိုတုန်လှုပ်သွားစေတဲ့အရာကတစ်ညမှာညစာအတွက်စားရင်းသူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့နေရာမှာအတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲ။ ကျွန်တော့်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်က ၈ နှစ်အရွယ်သမီးလေးကိုရေချိုးနေတုန်းကလေးတွေအပြင်ထွက်ပြီးပြောင်းလိုက်တယ်။ ၈ နှစ်အရွယ်အဝတ်အချည်းစည်းရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့ရုတ်တရက်ဆိုသလို၊ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာလိင်ဆိုင်ရာအယူအဆတွေကိုစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းထိတ်လန့်သွားပြီးချက်ချင်းပဲလမ်းလျှောက်ထွက်လာပြီးကျွန်တော့်ဇနီးကိုသူမယူနိုင်သလားလို့မေးခဲ့တယ်။
ဒါကသင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုပြောနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ ဤရွေ့ကားငါသည်ငါ့အသက်တာ၌အစဉ်အဆက်ဖူး tained ည့်ခံတောင်မှအတှေးမဟုတ်, သို့တိုင်, သူတို့ကဘယ်နေရာမှာထဲကရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဘယ်နေရာမှာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ငါယခုကြည့်နေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတွင်အဝလွန်သောဆံပင်မရှိသောအမျိုးသမီးများကိုပုံဖော်ထားသည် - ကျွန်ုပ်အထူးသဖြင့်ကြိုက်နှစ်သက်သည်မဟုတ်၊ သတိမပြုမိသော်လည်း - ကျွန်ုပ်သည်မသိသည်ကကျွန်ုပ်စိတ်ထဲစွဲမှတ်သွားခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကကျွန်ုပ်ကိုဤသို့ပြုနိူင်ပြီးအလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ငါစီမံခန့်ခွဲဖို့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းခဲ့ကြပေမယ့်ဒါဟာခက်ခဲသည်နှင့်ငါအတော်လေးနိုးနိုးကြားကြားရှိနေဖို့ရှိသည်။ ဒီပြproblemနာကိုရပ်တန့်ဖို့ငါတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာမသိဘူး။ ငါ့အတွက်ငါ့မှာကွန်ပြူတာမရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူဝင်လို့မရဘူးဆိုရင်ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုဟာပြuseနာဖြစ်လာမှာသေချာတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အန္တရာယ်များကိုအမျိုးသားများအားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်သည့်နေရာများယခုတွင်ရှိနေခြင်းသည်အားရှိစရာပင်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ၊ အထူးသဖြင့်လူအများစုကြားမှာကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒါကိုအသေးအဖွဲကိစ္စအဖြစ်ရယ်မောဖို့အားပေးခံရတယ်။
ဆီးခုံမို့မို့သောဆံပင်နှင့်ထင်ရှားသော labia minora တို့သည်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်သာဖွံ့ဖြိုးသည်။ နှစ် ဦး စလုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြောင့်မတ်သောအမျိုးသားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆီးခုံမို့မို့တွင်ဆံပင်နှင့်ပုံမှန် labia များ (အခြားသူများအကြား) ၏ပုံရိပ်များကို အသုံးပြု၍ အရွယ်ရောက်ပြီးသောအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုရမ်ရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများသည်သူတို့မုတ်ဆိတ်ရိတ်ထားသောအမျိုးသမီးများအထူးသဖြင့်နှစ်သက်ဖွယ်ရာကိုရှာမတွေ့ပါ။ သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊
အများစုအတွက်, ဒီဂန္ဇာတ်လမ်းမသိစိတ်မသိမသာ prepubescent အမျိုးသမီးများအတွက်အမြင်အာရုံအကျိုးစီးပွားစိတ်ဓာတ်။ “ အမွေးမရရင်တော့ပူတော့ပူမှာမဟုတ်ဘူး။ ပြန်ပစ်လိုက်”
သို့သော်ယနေ့ညစ်ညမ်းသောကမ္ဘာတွင်စအိုကဲ့သို့သော“ ဆံပင်ရိတ်ခြင်း” သည်ဖြစ်ပျက်နေသည် က de rigueur ။ ကျနော်တို့အခုသူတို့ထားတဲ့ unshaven အမျိုးသမီးနှင့်အတူလုပ်ဖို့ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ) ဘာမျှမရှိသည်လိမ့်မယ်ဟုလူပျိုတို့ကိုနားထောင်လော့။ ဘာဖွစျခဲ့ပွီနညျး ဆယ်ကျော်သက် porn အသုံးပြုသူများအ depilated ဒီတခါကြားနေရအပေါ်သူတို့သွားဖြတ်တောက်လျက်ရှိသည်။ ဤသည်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်ဆုချခြင်းနှင့်ဟုန်းဟုန်းဆက်စပ်တွေကို-၌ဤအမှု, hairless လိင်အင်္ဂါမှသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထ wiring မှအများဆုံးအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြရုံတဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတူညီတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းအချို့အရွယ်ရောက်ကြည့်ရှုသက်ရောက်သည်။
အထိခိုက်မခံတဲ့ ဦး နှောက်ဟာပြင်းထန်သောအော်ဂဇင်အနည်းငယ်နဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းအသစ်ကိုချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းနောက် ဦး နှောက်ပိုင်ရှင်သည်သတိကိုသတိမပြုမိမီထိုသို့သော ဦး နှောက်သည် (နှိုးဆွခြင်းသို့မဟုတ်တွန်းလှန်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ) ထိုအချက်ကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်သည်အားကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် လူတစ် ဦး ၏တိုကျရိုကျ cortex မီ အဆိုပါ cue ပယ်ချဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
တချို့ဦးနှောက်မှာတော့ဂန္အေးစက်အကျိုးကို circuitry ပိုပြီးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့ချောဆင်ခြေလျှော၏ထိပ်ပေမယ့်ဖြစ်ထေူ၏။ ဤရွေ့ကားကိုပြောင်းလဲ key ကိုဦးနှောက်ဆားကစ်အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်တစ်အများကြီးအဆင့်မြင့် (ထိခိုက်လွယ်) ထုတ်လုပ်ရန်။ ဤသည်ကဦးနှောက်အပြောင်းအလဲမကြာခဏအနေနဲ့ခြုံငုံဖြင့်လိုက်ပါသွားဖြစ်ပါတယ် လြော့ပေါ့စေ ဦး နှောက်ရဲ့အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု (desensitization) ၌တည်၏။ အတူတူဒီစွဲ -related အပြောင်းအလဲများပို။ ပို။ လှုံ့ဆော်ပစ္စည်းများအတွက်စွဲလမ်းမောင်း။
ဆံပင်မရှိ၊ ငယ်ရွယ်သောမျက်ရည်ယိုဗုံးသည်အမျိုးသမီးမိတ်ဖက်များနှင့်ယနေ့ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ပါတနာများဖြစ်လာနိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ cue-conditioned အိမ်ထောင်ဖက်ကိုဖွင့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်လေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖော်ပြသည့် labia ဒီထက် protrude labia ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဖတ်စာအုပ်များနှင့်အခြားသတင်းရင်းမြစ်အတွက်ပုံဖော်ထက်။
ရလဒ်? မရင့်ဖယောင်းကုသမှု, ဒါပေမယ့်လည်း labia ခွဲစိတ်ကုသ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာင့်ကျက်မှု၏အရိပ်လက္ခဏာပပျောက်ရေးဖို့ ပို. ပို. အဖြစ်များဖြစ်ကြသည်။ ရိတ်ခြင်းနှင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုအသုံးပြုခြင်း, အမျိုးသမီးများတမင်တကာ, ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသူတို့ကိုနုကိုကြည့်အောင်သည်လူငယ်သူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါ neotenizing နေကြသည်။
ကျနော်တို့ကလေးတွေနှင့်အတူလိင်ဘို့ငါတို့ခြင်းကိုမနှစ်သက်ကွာ whittling ပါသလား?
ကလေးငယ်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတစ်ချိန်ကစိတ်ဓာတ်ကျစေသည့်ပြောင်းလဲထားသောအတားအဆီးတစ်ခုကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့်အမြင်အာရုံအရသာကြောင့်ဤပြောင်းလဲမှုလား။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်လျှင်လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးရန်မည်သို့မျှော်လင့်နိုင်သနည်း။ သို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသုတေသနကိုပင်ပြုလုပ်ပါသလော။ အရွယ်မရောက်သေးသူများ၏ရုပ်ပုံများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရန်ယနေ့အာဏာပိုင်များ၏စိတ်အားထက်သန်မှုရှိသောကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိကြောင်းသက်သေပြသည်။ အမည်မသိအင်တာနက်ဖိုရမ် မှလွဲ၍ ဤကဲ့သို့သောခံစားချက်များကိုဆွေးနွေးပြောဆိုရဲမည်မှာသေချာသည်။
တစ်ဦးကဆွေးနွေးမှုကျိန်းသေသို့သော်လိုအပ်သည်။ မိုင်းနား-ဆွဲဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်၎င်းတို့၏အလိုဆန္ဒများကိုတွေ့မြင် တစ်ဦးလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့။ ဒါဟာအကြားခြားနားတက်ရှင်းလင်းရန်သမ္မာသတိရှိသောလိမ့်မယ် သူတို့ရဲ့အခွအေန နှင့်ကျပန်းကြိုး, နောက်ပြန်လှည်ပလပ်စတစ် tastes-ရှေ့မှာ overstimulated porn အသုံးပြုသူများအ Maps များအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမှားယွင်း။ ဥပဒေဘက်တော်သားအရာရှိလည်းခြားနားချက်ကိုသင်ယူဖို့လိုအပ်:
ကိုလှ ဦး - လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်လောက်တုန်းက porn ကိုပုံမှန်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးလှပသောအမျိုးသမီးများ၊ ထို့နောက်အမာရွတ်များ၊ ထို့နောက်ထူးဆန်းသောသွင်းကုန်များ၊ ထို့နောက် transvestites များ၊ critters များ၊ hermaphrodites များ၊ ထို့နောက်ဆယ်ကျော်သက် porn များ၊ ထို့နောက်ငယ်ရွယ်သောမော်ဒယ်များနှင့်ယခုထောင် (မကြာမီသွားတော့မည်) ရှိသေးသည်။ နှစ်တွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုစိတ် ၀ င်စားလာပြီး“ အသစ်အဆန်း” ရှာဖွေမှုကိုပိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တွင်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။
ကျပန်း, မလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များဆည်းပူးသူတွေကိုသူတို့ကို reverse ကောင်းသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်?
1 ။ ကနေစိုးရိမ်ပူပန် စိုးရိမ်ပူပန် တစ်ဦး uncharacteristic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာအကြောင်းကိုတတ်နိုင်သမျှ လည်း မလိုလားအပ်သောတုံ့ပြန်မှုများဆက်လက်ရှိနေသေးမလားဆိုသည်ကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောသတိပေးချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ စစ်ဆေးမှုတစ်ခုစီသည်သက်ဆိုင်သော ဦး နှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပိုမိုအားကောင်းစေပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပို၍ ခက်ခဲစေသည်။ ဤ OCD ကိုပြောင်းပြန်လုပ်ရန်အတွက်အကူအညီကိုကြည့်ပါ ဂျက်ဖရီ Schwartz MD.
၂။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲမြဲမြဲအသုံးပြုခြင်းသည်ကျပန်းအရသာဖြစ်နိုင်သည် morph ဆက်လက် အသစ်ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးတုန်လှုပ်ဖွယ်, လမ်းညွှန်များအတွက်။
ပြောင်းပြန်အရသာခက်ခဲတဲ့နိုင်ပါတယ်။ ပြaboutနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့စိတ်ကူးမထားဖို့၊ စိတ်မပျက်ဖို့စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်။ အင်တာနက် porn ၏အမြဲတမ်းအသစ်အဆန်းကိုရှောင်ခြင်းသည်လည်းများစွာအထောက်အကူပြုသည်။
hairlessness အသေးအဖွဲ porn ရှိပါသနည်း
သင်က“ အိုး၊ ငါကြည့်နေတဲ့ကလေးနဲ့လူကြီးကြားကခြားနားချက်ကိုငါသိတယ်။ ” ဒါကအချက်မဟုတ်ပါဘူး။ Pavlov ၏ခွေးများသည်သူ၏ခေါင်းလောင်းနှင့် Alpo အကြားခြားနားချက်ကိုသိသော်လည်း၊
ဦးနှောက်ပလပ်စတစ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦး cue တက် Wired ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ကတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်သည့်အခါ သိ. မရှိလမ်းရှိသည်။ တစ်ဦးကပြန်လည်ကောင်းမွန် porn အသုံးပြုသူကရှင်းပြခဲ့သည်:
တ ဦး တည်းရဲ့ ဦး စားပေးနှင့်အတူ kinda ရှုပ်ထွေးမှုများ။ ကျွန်ုပ်မူလကစွပ်စွဲခံခဲ့ရသည့်အရာများရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် [ပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်] အလွန်အမင်းအစပျိုးခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုတွေ့နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်စိတ်ကိုအာရုံမစိုက်စေပါ။ ညစ်ညမ်းမှုကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးခွဲထားသောအခါ၎င်းတို့သည်သင်၏ဘဝ၏လိင်ဆိုင်ရာနောက်ခံနှင့်တူသောကြောင့်သူတို့ကိုမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သောအတွေးများကိုပြင်းထန်စွာတုန့်ပြန်မည့်အစားကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာလျစ်လျူရှုပြီးကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုအခြားအရာတစ်ခုခုသို့လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။
သင်ဒါကိုစွဲကိုင်ထားပါကသင် porn မသုံးမီကသင်ကဲ့သို့သောနေရာတစ်ခုသို့ရောက်သွားလိမ့်မည်။ ဥပမာ၊ ငါကလိင်ကွဲလိင်တူချင်းယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်နှစ်များတစ်လျှောက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်အခြားယောက်ျားတွေရဲ့အမှိုက်ကိုမတော်တဆစစ်ဆေးမိခဲ့တယ်။ Porn ကဒီလူတွေအားလုံးမှာ penises တွေရှိတယ်ဆိုတာငါသိစေချင်တယ်။ ပြီးတော့ငါသူတို့ကိုမိန်းမလိုပဲကြည့်ခွင့်ရလိမ့်မယ်။ ငါသည်ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာမေးခွန်းထုတ်ဘယ်တော့မှပေမယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂစ်တာဆရာမရဲ့ crotch လေ့လာနေတွေ့သောအခါငါကအရမ်းထူးဆန်းခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ ငါဘာလုပ်နေတာလဲဟင်? ယောက်ျားတွေမကြိုက်ဘူး။ ” ၎င်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အလွန်ရှားပါးသောအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီး၊ ညစ်ညမ်းမှုသည် ဦး နှောက်အတွင်းကျပန်းပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေပုံကိုကျွန်ုပ်နားလည်သောကြောင့်ယခုစိုးရိမ်စရာနည်းပါးသည်။
ရန်တိုက်တွန်း ယခုချွတ်ရ အစွမ်းထက်လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်သော desensitized ဦးနှောက်အတွက်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည် အဆိုပါအီနှင့်အတူရုန်းကန်နေ overstimulation အောက်ပါ homeostasis မှပြန်လာ၏။ မည်သို့ပင်သင့်ရဲ့အခွအေန, သို့သော်, က hyperstimulating, ဒါမှမဟုတ် uncharacteristic, arousal cue အပေါ်ခုန်မတိုင်မီနှစ်ကြိမ်စဉ်းစားရန်ချေ။ ပိုကောင်းတဲ့အနေနဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ မသက်မသာကာလ ဦး နှောက်ဟာပုံမှန်အာရုံခံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အတွက်သင့်ပုံမှန်နှိုးဆွမှုကသင့်အတွက်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မကြာခဏဆိုသလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုထပ်ပြီးလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုဖိအားပေးခြင်းဖြင့်သင့် ဦး နှောက်ကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေတဲ့အရသာတွေကို ဦး နှောက်ထဲကို ၀ င်ရောက်ဖို့အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။
အချို့သော ဦး နှောက်များတွင်အပေါ်ယံအသင်းအဖွဲ့များပင်ညံ့ဖျင်းသည်။ ကောင်းမကောင်းဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ပလပ်စတစ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောလိင်ဆိုင်ရာအချက်များသည်သွားမရှိခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့လိင်အရသာကိုလည်းကျောက်တုံးထဲတွင်မထည့်ထားပါ။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ကျနော်တို့မှာထင်ထားတာထက်ပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုရှိတယ်။ လေ့ကျင့်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသည့်ကလေးငယ်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစူးစိုက်မှုအားမည်သူရှာဖွေရန်လိုအပ်သနည်း။
ငါ့အဆွေခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မမတိုင်မီဆောင်းပါးရုံရက်အနည်းငယ်ကဒီအကြောင်းဆွေးနွေးမှုရှိခြင်းခဲ့ကြသည်။ ငါ့အဆွေခင်ပွန်း pubes ထင်နှင့်ငါက sexy ထင်သော်လည်းဂျိုးကြားဆံပင် (နေသမျှကာလပတ်လုံးကကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်ကဲ့သို့) အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစပြီးမေးခွန်းတွေစခဲ့တာပေါ့။ ဆံပင်အားလုံးသည်သဘာဝကျပြီးလိင်မှုဆွဲဆောင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကြာသည့်တိုင်အမျိုးသမီးများသည်ဘရာဇီးနှင့်ယောင်ယောင်ယောင်ယောင်ယောင်ယောင်ထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ကြပါ။ တကယ်တော့ဟောလီးဝုဒ်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးမြင်ကွင်းတစ်ခု (Basic Instinct 1992) မှာ Sharon Stone ဟာထူထပ်တဲ့ချုံပုတ်တစ်ခုတပ်ထားတယ်။
ဒါကြောင့်လိင်အရသာနဲ့ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုပြောင်းလဲတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံဘယ်လောက်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော့်အတွက်ရှင်းပါတယ် ငါဟောင်းဖြစ်သူနဲ့ချိန်းတွေ့တုန်းကငါကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်သူဖယောင်းမရဖို့တောင်းခဲ့ရတယ်။ မှတ်တမ်းအတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆံပင်မရှိခြင်းကိုလူငယ်များနှင့်မပေါင်းသင်းပါ (သို့သော်နှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုနားလည်သော်လည်း) ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအတွက်အဓိကအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါတောင်သတိမထားမိဘဲ porn အတွက်ကြည့်ရှုသောငါ၏အဖော်နှင့်အတူအမှုအရာလုပ်နေတာနေပါတယ်။ ငါအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏သဘောသဘာဝကိုချစ်ကြောင်းဆိုကြသည်လျှင်ပင်သူမ၏ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်များကစိတ်ပျက်နေပါတယ်။ ဒါဟာငါ့ကို embedded, ဒါပေမယ့်ငါသတိရှိရှိကအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အချိန်နှင့်သည်းခံခြင်းနှင့်အတူ, ငါ့စနစ်၏ထွက်ရရန်ကြိုးစားသောအခါ, ထိုကြောင့်အရွက်သိမြင်နေပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးပဲအချိန်ကြာမြင့်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက် rewiring ။
သင်၏“ ယောနိ” ပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ ။ ငါစအို porn နှစ်ပေါင်းစောင့်ကြည့်ကြောင့်တူညီတဲ့ပြproblemနာရှိသည်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုစအိုအတွက်ကြိုးပေးတယ်။ ဒါကြောင့်လိင်အင်္ဂါလိင်ကသိပ်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့်ရှည်လျားတဲ့ reboot ကာလပြီးနောက်ငါ့အဘို့ပြောင်းလဲသွားပြီ။ ငါ blowjob တစ်ခုသို့မဟုတ် handjob တစ်ခုကနေစိုက်ထူရလေ့, ဒါပေမယ့်သူကအမှန်တကယ်လိင်အင်္ဂါလိင်သို့ရောက်သောအခါ, ငါ့စိုက်ထူအမြဲမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ အခုတော့အဲဒါဟာတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အရာပါ။ မင်းရဲ့အိပ်မက်တွေကိုမင်းရှေ့မှာငါရှေ့မှာအဝတ်မရှိဘဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပြီ။ မင်းကိုသူမယူဖို့စောင့်နေတယ်။ မင်းဒီနေရာမှာငါအမြဲရှိနေချင်တယ်ဆိုတာကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ပြီးအောက်ထပ်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ၎င်းသည် reboot တစ်ခုဖြင့်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ rebooting ကိုတက်ပြီးစုစုပေါင်းလုပ်ပါ။ အဓိကပြissueနာတစ်ခုမှာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။
ငါ ၇၇ ရက်လုံးလုံး pmo no reboot လုပ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ကူးယဉ်တွေကိုသူတို့ ၀ င်လာတာနဲ့အမျှတားဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ မင်းငါ့ဘလော့ဂ်တွေ၊ ငါတင်ခဲ့တာတွေကိုဖတ်ခဲ့ရင်မင်းမေးခွန်းတွေအများကြီးဖြေကြားခဲ့လို့သင်ခန်းစာအများကြီးသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကအခြားနေ့ကငါခြေမ၊ အမျိုးသမီးမပါဘဲနှိုးဆွနိုင်သလားဆိုတာစမ်းကြည့်တယ်။ ငါသွားပြီးအနှိပ်ခံလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးက blowjob ရလိုက်တယ်။ သူမခြေထောက်များကိုကြည့်ခြင်းကကျွန်တော့်ကိုလှည့်ပေးသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ သို့သော်သူတို့ကိုငါနမ်းရန်သွားစဉ် (ရှေ့ပြေးနေစဉ်တစ်လျှောက်လုံး) ကျွန်ုပ်သည်လှည့်စားမှုနည်းသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါနဲ့သူမရင်သားတွေ၊ မျက်နှာနဲ့သူမရဲ့တင်းပါးကိုအာရုံစိုက်ပြီးသူမရဲ့နို့သီးခေါင်းကိုစုပ်ရင်းသူမခေါင်းကိုနမ်းနေတုန်းသူမရဲ့တင်းပါးကိုနမ်းခဲ့တယ်။ ငါအဆုံးသတ်ငါပြmyနာမရှိဘဲငါ့လိင်တံကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သုက်လွှတ်။ ကျွန်တော့်လိင်တံဟာနှိပ်နယ်ခြင်းအတွက်အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းအချိန်ကတည်းကတကယ်ပဲခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ငါသူမကို handjob ပေးသည့်အခါကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အထိခိုက်မခံကြောင်းသတိပြုမိပြီးငါမလိုချင်သောကြောင့်သူမသည် blowjob ဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းပြီးအော်စကာစလုပ်တော့ကျွန်မရဲ့လိင်တံဟာဘယ်လောက်ကြီးကျယ်တယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အဝမကုသနိုင်သေးပါသေးသည်။ သို့သော်ထူးဆန်းသော fetish များကိုကျွန်ုပ်လိုချင်သောဆန္ဒသည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီးကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်အမှန်တကယ်ကောင်းသောအရာများကိုပြန်လည်တည့်မတ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်သိနေဆဲဖြစ်သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဘလော့ဂ်များကိုဖတ်လျှင်သင်အများဆုံးနို့စို့ကဲ့သို့ fetish ရှုထောင့်နှင့်ပတ်သက်။ သင်တို့ကဲ့သို့ငါစိတ်ပူခဲ့သည်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ငါအသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီ၊ အသက် ၁၃ နှစ်မှာခြေလျင် fetish porn နဲ့စတင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါက bdsm၊ အရှက်ခွဲခြင်း၊ femdom၊ ballistic အဖြစ်သို့တက်သွားကာမိန်းကလေးခွေးတစ်ကောင်လိုဟန်ဆောင်နေသည်။ ဒါကြောင့်ငါကောက်ချက်ချတာကငါဟာအမြဲတမ်းခြေထောက်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါက porn ကိုမကြည့်ခင်ခြေထောက်ကိုကြိုက်ခဲ့လို့ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါကဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။ နှင့် Boob နှင့်ရင်သား။ ယုတ္တိနည်းကျစွာယုတ္တိနည်းကျစွာသင်ထင်ကောင်းထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်က၎င်းကိုနှိုးဆွခြင်းမရှိပါ။ သင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုခေတ္တအနားယူပြီးနောက်အချိန်အတန်ကြာအနားယူကြောင်းသင့် ဦး နှောက်ကနားလည်လိမ့်မည်။ အခုတော့ငါစိတ်ကူးယဉ်လွန်းတာတောင်မှမရှိတဲ့အပြင်မိန်းမအစစ်အမှန်တွေကိုမြင်တဲ့အခါ၊ သင့်တွင်ကျွန်ုပ်၌မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်ကိုကူညီလိုသည်။ ငါဘဝ၌ကြီးစိုးကျောင်းမှာနပန်းသမားဖြစ်ခဲ့သည်
ငါနင့်လိုပုံပြင်တူတူပါပဲ .. ဒါပေမယ့်ကွာခြားချက်ကတော့ငါ porn မကြည့်ခင်မှာခြေထောက်ဝတ်စရာမလိုဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စအို ၀ တ်စုံနောက်မှာခြေညှပ်ကိုကြည့်ပြီးစတာပါ။ ဒါကသာမန်မဟုတ်ခဲ့၊ ဒါက femdom နှင့်တကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့ခြေလျင် fetish ဗီဒီယိုများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အခုစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတာကဒီစိတ်ကူးတွေအားလုံးကိုငါရပ်တန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ၊ ငါဟာကောင်းမွန်တဲ့ခြေထောက်တွေရှိတဲ့မိန်းကလေးအစစ်အမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ရလာပေမယ့်ငါဟာညစ်ညမ်းတဲ့ခြေထောက်ကိုမကြည့်မိခဲ့ဘူး၊ ငါမိန်းကလေးရဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်သင့်မသင့်လားမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကမိန်းကလေးတချို့ကိုတွေ့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ရင်သားတွေ၊ တင်းပါးတွေကိုကြည့်လိုက်တာပဲ။
porn-induced ED ကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားခဲ့သောအောင်မြင်သော rebooters များအတွက်မေးခွန်း - အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်“ ဦး စားပေးချက်များ”
ရုံငါ YBOP နှင့်ဆက်စပ်, ဒီ subreddit တွေ့ရှိခဲ့ဒါဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ nofap နှင့်ခိုင်ခံ့သောသွား၏ 17 ရက်။
ငါကောလိပ်ကစပြီးညစ်ညမ်းတဲ့ ED နဲ့ရုန်းကန်နေရတုန်း (အခုနံနက် ၂၇) ။ ဗားရှင်းအတိုမှာကျွန်ုပ်ကောလိပ်ကျောင်းတက်စဉ်အတွင်းလှပသောအမျိုးသမီး ၄ ယောက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အခွင့်အရေးရှိပြီး porn-induced ED ကြောင့်ကြိုးစားမှုအားလုံးသည်မအောင်မြင်ပါ။ ကိစ္စရပ်နှစ်ခုမှာအဝတ်တွေပြတ်သွားပြီးကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ကျန်တဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုမှာတော့ငါမထနိုင်ဘူးဆိုတာတောင်မှမသိဘူး။ မင်းတစ်ခုခုနဲ့ရင်းနှီးနေပြီလား
သမိုင်းကြောင်းအရကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုရနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (၁။ မိန်းကလေးတစ် ဦး တည်းနှင့်အကြိမ်များစွာကြိုးစားပြီးမှဖြစ်လျှင်) ၁) ကွန်ဒုံးမပါ ၀ င်လျှင် ၂) သူမတွင်မသန်မစွမ်းသော၊ ခန္ဓာကိုယ်၊ အစာအိမ်အစရှိသဖြင့်၊ - စောင့်ဆိုင်းပါ - ၃) သူမအနေဖြင့်လုံးဝရိတ်သိမ်းခြင်းခံခဲ့ရသည် ငါဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ နာရီပေါင်းများစွာအင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှကျွန်ုပ်သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မတိုင်မီကတည်းကစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။
ကောလိပ်ရှိထိုမိန်းကလေးများနှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံစဉ်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှကျွန်ုပ်၏ "လိုအပ်ချက်များ" ကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ပါ။ သူတို့ထဲမှမည်သူမျှမရိတ်ရ၊ အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်သိသိသာသာကျွန်တော့်ကိုပိတ်ထားလိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်နဲ့ / သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အဆီတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကငါ့ကိုပဲပိတ်လိုက်တာကိုငါမှတ်မိနေသေးတယ် အမြင်အာရုံ။ အားလုံးနှိုးဆွသေဆုံး, ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးငါဒါထင်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ဒီဟာကစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းလှပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးအလောင်းတွေဟာညစ်ညမ်းကြယ်တစ်လုံးရဲ့ပုံနဲ့တူသလိုမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့အဲဒီမှာထပ်တူကျတဲ့အမျိုးအစားတွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာမယ့်သူများစွာရှိသေးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
ဒါကြောင့် porn-induced ED ကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြတဲ့သင်တို့ရဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော့်မေးခွန်းကငါဖတ်လိုက်တာနဲ့အောင်မြင်တဲ့ reboot တစ်ခုကကွန်ဒုံးသုံးဖို့ခွင့်ပြုပေးလိမ့်မယ်။ (hooray!) သို့သော်သင်၏စိတ်ကြိုက်သို့မဟုတ်အရသာကောအသို့နည်း။ ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်သို့မဟုတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာလက်ကိုင်များကဲ့သို့သောအရာများသည်“ ပိတ်ထားသည်” (သို့မဟုတ်သင်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ဖူးသူ) ရှိခဲ့ဖူးပါသလား၊ သို့သော် reboot တစ်ခုကသင့်ကိုနှိုးဆွစေသောအရာကိုပြန်လည်အောင်မြင်စွာပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သလား။
ငါသူတို့ကလိင်ကျဆင်းသွားလိမ့်မယ် / အမျိုးသမီးတစ် ဦး ရဲ့ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်အပေါ်အခြေခံပြီးချိတ်ဆက်အခြေအနေစွန့်ခွာမယ်လို့စေတနာ့ဝန်ထမ်းတဲ့ယောက်ျားလေးကျောင်းသားနှစ် ဦး ကိုငါသိ၏။ တစ်ယောက်ကသူသည်ရှင်းလင်းသောမိန်းမတစ်ယောက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ပြောခဲ့သည်၊ နောက်တစ်ယောက်ကတော့မိန်းမတစ်ယောက်မှာဆံပင်မရှိရင်ချိတ်ထားမယ်လို့ပြောတယ်၊
ညစ်ညမ်း labiaplasty ၏မြင့်တက်နောက်ကွယ်ကသာတရားခံမဟုတ်ပါဘူး [ဆရာဝန်တွေလည်းများတယ်]
လူငယ်တို့အမြိုးသမီးစံပြ labia အဖြစ်မျှထိုကဲ့သို့သောအရာတစုံတခုရှိကြောင်းလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ် - နေပါစေသူတို့ကအင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်သောအရာကို
ဒါကြောင့်ငါကမိန်းကလေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းတာကတော့သူတို့နဲ့ porn မှာတွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးသရုပ်ဆောင်နေတယ်။ နှုတ်ကိုဆွဲထုတ်ခြင်း၊ ပါးစပ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းသို့မဟုတ်စအိုစသည်တို့ကိုအတင်းအကျပ်တောင်းဆိုခြင်းကဲ့သို့ပင်ယခုအချိန်အထိမည်သည့်မိန်းကလေးမျှလက်ခံခြင်းမရှိသောကြောင့်များသောအားဖြင့်ဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေသည်။ ငါထိန်းချုပ်ဖို့ဆက်ကြိုးစားနေပေမယ့်အခုအချိန်မှာတော့အကူးအပြောင်းဖြစ်သွားပြီးငါ့ "ညစ်ညမ်းတဲ့" ဦး နှောက်ကငါ့ကိုမှာထားတာကိုအလိုအလျောက်အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ ဒီဟာကိုဘယ်လိုကျော်ရမလဲ။ အခြားမည်သူခံစားနေရသနည်း။ အဲဒါဘုံလား၊
11 နည်းလမ်းများအဓိက Porn လိင်အကြောင်းအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်လှည့်ဖြား